रायोको तरकारी खाँदा यस्ता समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ
सोह्रश्राद्ध के हो ? कसरी श्राद्ध गरे पितृमोक्ष अर्थात तृप्त हुन्छन् ?
काठमाडौ । आश्विन कृष्ण प्रतिपदा देखि औंसीसम्म १५ दिन र भाद्र शुक्ल पूणिर्माको एक तिथि जोडेर सोह्र दिनको समयलाई सोह्रश्राद्ध भनिएको हो । संस्कृत भाषामा यसलाई महालयश्राद्ध ,पार्वणश्राद्ध भन्ने चलन छ । आश्विनमहिनाको कृष्ण पक्ष पितृहरूलाई तृप्त तुल्याउने समय हो, त्यसैले यसलाई पितृपक्ष भन्दछन् । सोह्रश्राद्ध गर्नाले आफ्ना घरका सबै पितृ र मावलीका चारपुस्ते पितृ तृप्त हुने विस्वास छ । पौराणिक ग्रन्थ अनुसार विष्णु पुराण,नृसिंह पुराण, गरुड पुराण आदिले पनि सोह्रश्राद्ध अनुसरण गरेको पाइन्छ । त्रेता युगमा रामले ले पनि वनबास बस्दा सोह्रश्राद्ध गरेको प्रसंग छ ।
सुन पाउजु र खुट्टामा पहिरिनु हुँदैन
एजेन्सी । संसारमा पाइने विभिन्न महङ्गा धातुमध्येको एक धातु हो सुन । सुन प्रायः मानिसहरु गहना बनाएर लगाउने गर्छन् । सुनका विभिन्न गहना बनाएर चलन भारत र नेपालमा धेरै लगाइएको पाइन्छ ।
आखीँभौ हेरेर पत्ता लगाउनुहोस् स्वभाव, चरित्र र भाग्य
एजेन्सी । पुरानो भनाई छ कि शिर ठूलो हुने मान्छे निकै भाग्यमानी हुने गर्छन् । पुराना परम्पराअनुसार मानिसलाई हेरेर उसको स्वाभाव, चरित्र र भाग्य पत्ता लगाउन सकिने बताइन्छ ।
जानीराखौं उखुको जुस पिउँदा ध्यान दिनुपर्ने यी कुराहरु...
तपाईलाई पायल्स भएको छ ? त्यसोत भए यी चिज नखानुस्
काठमाडौं । पायल्सबाट धेरै मानिसहरु पीडित भएपनि खुला रुपमा जो कोहीलाई भन्न सकेका हुँदैंनन्। केही उपचारले ठीक भएजस्तो भएपनि फेरि यो समस्या पुनः दोहोरिन्छ।
एजेन्सी । सोयाविन एउटा यस्तो शाकाहारी भोजन हो जसमा मांसहारमाभन्दा पनि धेरै प्रोटीन र पोषक तत्व पाइन्छ । यसको प्रयोग विभिन्न तरहले समेत हुने गरेको छ ।
बिहान छिटो उठ्दा स्तन क्यान्सरको सम्भावना कम हुने
एजेन्सी । तपाई बिहान कति बजे उठ्नुहुन्छ ? धेरैजसो मानिसहरु बिहानको समयमा मस्त निदाउँछन् । बिहानको निद्रा सबैलाई प्यारो हुन्छ । हालै एक अध्ययनले बिहान छिटो उठ्ने महिलामा अन्य महिलाको तुलनामा स्तन क्यान्सरको खतरा कम हुने देखाएको छ । बैज्ञानिकहरुले युके बायोबैंक स्टडी र ब्रेस्ट क्यान्सर एसोसिएशन कन्सोर्टियम स्टडीमा सहभागि चार लाख भन्दा बढि महिलाहरुको तथ्याङ्क विश्लेषण गरेका थिए । उक्त विश्लेषणमा छिटो उठ्ने महिलाहरुमा स्तन क्यान्सरको खतरा कम हुने देखाएको छ ।